हराउँदैछ असारे मौलिकता र परम्परा - चौतारी पोष्ट अनलाइन
पाल्पा रामपुरका कृषक लक्ष्मी तिवारीलाई यसरी गीत गाएर पञ्चेबाजाको तालमा दिनभर धान रोपाइँ गरेको याद झल्झली आउने गर्छ । त्यस समयमा उनले रोपाइँलाई एउटा ठूलो पर्वका रुपमा पनि लिने गरेका छन् ।
असारे भाकामा आफ्ना साथीसङ्गीहरुसँग दिनभर गीत गाएर धान रोप्दा मेलो सकेको पनि उनलाई पत्तो हुँदैनथ्यो । धेरै परको पनि होइन । आजभन्दा दुई दशकमात्र अघिको स्मरण हुन्छ उनलाई । बाजे रोपाइँ (पञ्चेबाजा बजाउँदै गीत गाएर बाजाको तालमा गरिने रोपाइँ) गरेर आफ्ना साथीसँग हिलो खेलेर रमाइलो गरेको अनुभव उनीसँग ताजै छन् ।
अहिले यस्तो रोपाइँको प्रचलन त हराएको छ तर आफ्ना सन्ततीलाई ती पुराना यादहरु सुनाएरै भए पनि उनी चित्त बुझाउँछन् । “जमाना सस्तो र सजिलो पनि आयो । अहिले सजिलै खेतीपाती गर्ने, जोत्ने आदि कामका लागि आधुनिक प्रविधिहरु भित्रिए अनि किन दुःख गर्नु ? वर्षाको रोपाइँकै लागि भनेर अब वर्षभरि हलगोरु किन पाल्नु ? सजिलो पाएपछि मानिसले अप्ठेरो किन गर्नु र ? ” उनी सुनाउँछन् ।
रोपाइँमा साथीभाइबीच मायाप्रेमका साथै ठट्यौली पाराका गीत गाउँदा एक प्रकारको रमाइलो वातावरण हुने गरेको तिवारीको अनुभव छ । पुराना असारे भाका तथा उवाली गीत गाएर धान रोपाइँलाई एउटा रमाइलो पर्वका रुपमा लिने गरे पनि अहिले भने परम्परा नै परिवर्तन भएको उनी बताउँछन् ।
भन्छन्, “दिनभर धान रोपाइँको रमाइलोले थकाइ लागेको पनि पत्तो हुन्नथ्यो तर अहिले हिजोका ती दिनहरु र त्यो वातावरण आँखामा झलझली घुमेर आउँछ, बिहान ट्र्याक्टर लगायो भने दिउँसो एकै छिनमा खेत रोपेर सकिन्छ” ।
आधुनिक प्रविधिको विकासले खेती गर्न सजिलो बनाएको त छँदैछ । यसमा उनी र अरू किसान पनि खुशी नै हुन्छन् तर प्रविधिको विकासले पुराना मौलिक संस्कृति नै हराउन पुगेकामा भने कृषक तिवारीलाई चिन्ता छ ।
“महिना दिन अघिदेखि नै रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको बन्दोबस्त गरेर राखिन्थ्यो, असार लागेपछि गाउँमा पालैपालो मेलापात हुन्थ्यो, दिनभर साथीसङ्गीसँगै हिलो खेल्दै बाजाको तालमा गीत गाउँदै धान रोपेर घर फर्कंदा थकानको अनुभूति पनि हराउने गथ्यो । अहिले ट्र्याक्टरले हिलो बनाएपछि दुई तीन घण्टामै रोपेर सकिन्छ”, तिवारीले भने ।
‘हलगोरु झरे खेताली झरे बेसीँको रोपाइँमा,
यस्ता गीतमा महिलाका घर माइती गर्दाका दुःखसुख वेदनाका भाव पनि झल्किन्थ्यो । मेलापात गर्दा आफूले भोगेका कष्ट सबै साथीभाइसँग गीतमार्फत पोख्दा हल्का पनि हुने गर्दथे भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरु । उनीहरुको अनुभव छ, “त्यस्तो गीतसङ्गीत न अहिले रोपाइँका बेला सुन्न पाइन्छ न त तीजकै बेलामा ।”
पहिला पञ्चेबाजाको तालमा धान रोप्ने, अन्न धेरै फलोस् भनी खेतको बीच भागमा भकारी राख्ने, एकअर्काबीच हिलो खेल्ने चलन रहेको पहिलेका बूढापाकाहरु बताउनुहुन्छ ।
“हलगोरु लिएर खेतमा जाँदा छुट्टै आनन्द लाग्थ्यो, बाजा बजाउने कोहीले रोप्ने कोहीले बीउ उखेल्ने गर्दा धान रोपाइँ पनि एउटा उत्सव जस्तै लाग्थ्यो”, भन्छन् उनी ।
खनजोत गर्न पावर टिलर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टरको सुविधा गाउँगाउँमा पुगेपछि खेती गर्ने परम्परामा परिवर्तन आउन पुगेको छ । विभिन्न निकायबाट कृषि बाली उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण औजार कृषकलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि कम लागत र छोटो समयमा कृषकले खेती गर्न थालेको रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाप्रमुख रामहरि पाण्डे बताउँछन्।
“पहिला खेती धेरै मेहनत र लगानी गर्नुपथ्र्यो, अहिले कम लागतमा छोटो समयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खेती गर्न थालेपछि काम छिटो सम्पन्न भएको छ भने कृषकले पनि राम्रै उत्पादन लिने गरेका छन्”, उनले भने ।
एकैघरमा हल गोरु देखिनै छोड्यो
परम्परागत तबरले गोरुका माध्यमबाट रोपिने धान अहिले कृषि यान्त्रिकीकरणको सहायताबाट रोप्न थालिएको छ । पाल्पामा गोरुले खेत रोप्ने पुरानो परम्परा हट्दै गएको छ । एक हल गोरुले दिनभर गर्ने काम पावर टिलर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टरबाट छोटो समयमा सम्पन्न हुने हुँदा यसप्रति कृषकको आकर्षण बढेको हो ।
रामपुर नगरपालिका–५ बाङ्गेपसल बस्ने कृषक ऋषिराम रेग्मीले छोटो समयमा धेरै काम सम्पन्न हुने भएपछि गोरुको ठाउँमा पावर टिलर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टर लगाएर धान रोपाइँ गर्न थालेको बताउनुभयो । कम लगानीमा काम छिटो सम्पन्न हुने भएपछि कृषकलाई धान रोपाइँ गर्न सजिलो भएको उनी भन्छन् ।
पहिले असारे रोपाइँका बेला खाने गरेको खाजा अहिले प्रायः पाइँदैन । अहिलेका युवाहरुका अगाडि ती खाजाहरु अब पुराना भइसके । पहिले पहिले असारे रोपाइँमा सेलरोटी, चिउरा, खट्टे, चाम्रे, दालभात, खिर, चामलको पुवा आदि खाने चलन थियो तर अहिले त्यस्तै छैन । अहिले खाजा पनि आधुनिक नै जस्तो चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटी आदिको प्रचलन छ।
परम्परागत कृषि औजारको सट्टा खनजोत गर्ने हाते ट्र्याक्टर, पावर टिलर, बीउ रोप्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन, गहुँ ठटाउने, धान झाँट्ने मेसिनको बढ्दो प्रयोग हुन थालेपछि कृषि व्यवसायमा आबद्ध कृषि मजदूर विस्थापित हुन पुगेका हुन्।
घरमा गोरु पालेर अरूको खेतबारी जोतेर वर्षमा रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल हनुभएका रामपुर नगरपालिका–५ बहखोला बस्ने धनबहादुर श्रेष्ठ गोरुको विकल्पमा गाउँमा ट्र्याक्टर आएपछि आम्दानीको स्रोत नै गुमेको बताए।
ट्र्याक्टर गाउँमा नभित्रिँदासम्म उहाँलाई वर्षायाम शुरु भएपछि खेतमा धान रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । एक दशक यता भने आफूले गोरुले जोत्दै आइरहेको खेतमा ट्र्याक्टरबाट रोपाइँ हुन थालेपछि आम्दानी गर्ने बाटो नै बन्द भएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सडकका ट्र्याक खोल्ने क्रममा होस् वा ट्र्याक खुलेका सडकका स्तरोन्नति, मर्मत, सुधारका क्रममा यतिखेर मानवीय श्रमको विकल्पमा डोजरको प्रयोग गर्दा कम आयस्रोत भएका मजदूरको रोजगारी नै गुमेको छ ।halokhabar.com/from
NextFulbari murder update: 26-year old arrested from Chopra